News Collection: के तपाई फ्लेक्सीसेक्सुअल हुनुहुन्छ ?
के तपाई फ्लेक्सीसेक्सुअल हुनुहुन्छ ?
संसारभर चर्चित सेलीब्रेटी बृट्नी स्पेयर्स र म्याडोनाको किस देखेर पुरा संसार स्तब्ध भएको थियो । किनभने यो मात्र सि गर्नेका लागि गरिएको थिएन । सेक्स विशेषज्ञहरुले उक्त किसमा शोध गरेर नयाँ शब्दको जन्म दिएका छन् । यसलाई ‘फ्लेक्सीसेक्सुअल’ भनिन्छ ।
फ्लेक्सीसेक्सुअल यतिबेला एउटा नयाँ ट्रेन्ड बनिरहेको छ। संसारभरका मानिसहरु यसलाई निकै तिब्रताका साथ फलो गरिरहेका छन् । फ्लेक्सीसेक्सुअल एउटा साधारण महिला हुन्छिन् । उनी पुरुष मित्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न मन पराउछन् । तर बायोसेक्सुअल महिलासँग फ्लर्ट गर्दछन् र मौका पाउने बित्तिकै सम्बन्ध पनि कायम गर्दछन्।
मनोबैज्ञानिक डा. सेसिलिया डी फेलिसका अनुसार आमरुपमा ४० को उमेरपछि महिलाहरुलाई सेक्सका बारेमा निकै धेरै अनुभव प्राप्त हुन्छ। एकै प्रकारको सम्बन्धमा रहँदारहँदा उनीहरु ‘बोर’ हुन्छन् र मस्तीका लागि उनीहरु यसप्रकारको सम्बन्ध बनाउछन् ।
हलिउड अभिनेतृ बेरीमोरका अनुसार उनीहरु महिलाका साथ सम्बन्ध कायम गर्न मन पराउछन् । किनभने उनीहरुलाई आफ्नो शरीरका साथ नयाँ प्रयोग गर्न मन लाग्छ । यही लिण्डसे लोहानले त यसलाई एउटा ट्रेण्ड बनाइदिएकी छन् । मनौबैज्ञानिकका अनुसार महिलाहरु पुरुषको तुलनामा बढी कामुक हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु दुवै सेक्सप्रति निकै छिटो आकर्षित हुन्छन् ।
हालैको कोको डी मरको सर्भेमा यो कुराको खुलासा भएको छ कि ६००० मध्ये २००० महिलाहरु महिलाका साथ सेक्स फ्यान्टेसी गर्दछन् । भलै यो अब ट्रेण्ड बनेको होस् र यसलाई नाम दिएको होस् तर यो नयाँ भने होइन् । यो प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको छ। एजेन्सी